Taliyaha Booliska iyo Duqa MUQDISHO oo la hadlay Dadkii Banaanbaxa dhigay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Taliyaha Booliska iyo Duqa MUQDISHO oo la hadlay Dadkii Banaanbaxa dhigay
Apr 13, 2019 - 13 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay Banaanbax Rabshado watay, kaasi oo ka dhashay dil saaka askari katirsan booliiska u geestay wiil bajaajle ahaa iyo abtigiis oo la socday.
Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed Sareeye Gaas Bashiir Cabdi iyo Duqa magaalada Muqdisho ayaa ku baxay meelaha ay ka socdeen banaan baxyada, waxa ayna Taliyaha iyo duqa Muqdisho la hadleen qaar kamid ah dadka banaan baxa dhigaya.
Duqa magaalada Muqdisho oo isna la hadlay banaan baxayaasha ayaa ugu baaqay in xaalada dejiyaan lana soo qaban doono gacan ku dhiiglaha.
Waa benalayaal waa munaafaqiiin. Sacbiye yarisoow asbuuc ka hor wuxuu balan qaaday tanoo kale in aysan dhaceyn maantana wey dhacday.
Waa laga gudbey xiligii nooryaanimada qofka isleh weli taa saa kuu shaqaynaysa waad laweydey sxb ee moolo kale moiryanimada karaadi somalia ha midowdo hanoolato cadawgeeda alle hajebiyo
Xamar cadde Huta hadda qabsaday haloo daayo…
Ha looga guuro waa hadii Somalida kale talo iga rabto….
Bal waxa isku haystaa dersa, sidee dadkaas dal nooga dhaxayn karaa?
Hala guuro oo yaan la isku soo noqon..,,!
Gaafaw ayaa oran jiray Tigrey ayaa dhalasho naga dhaxaysaa ee Ethiopia nagu dara haddaan Darood/ Kablalax nahay..
Maanta waan u garaabin.. Fucking Hutu.
Yaa daanyeer dal la yeelan kara..🤧
Xamar cadde Hutu hadda qabsaday haloo daayo…
Ha looga guuro, waa hadii Somalida kale talo iga rabto….
Bal waxa isku haystaan ila dersa, sidee dadkaas dal nooga dhaxayn karaa?
Hala kala baxo oo hala kala tashado oo hala guuro oo yaan la isku soo noqon..,,!
Iidoorka gooshada wata ayaa dhaama in daanyeer dal la yeelato.
Maanta waan u garaabin..
Waa in Balaxley darbi kii Barlin ka dheer laga dhisaa ama sida Yuhuuda iyo Falastine ama darbi Kenya rabto in ka dhisto NFD…
Yaa weli aaminsan in Xamar iyo daanyeerta qabsatay Somalia hogaaminyaan oo caasumad u noqoto…..? kuwa waxaas aaminsan waa daanyeer ka aqli xun daanyeerta Xamar ku habsaday.. planet of apes.com
Cawaan isku timid..
1 pictuare tells you thousand words= hal sawir ayaa kaaga filan in kun wax ogaato….!
see the big pictuare.🙀
Maxay ka banaan baxayaan,ma iyaga haystaba wax u dhaamaa dawladan?
Ma waxay diidanyihiin in nabadda la sugo oo wadanku xasilo.
Mise waxay maqleen Suudaan ayaan banaan bixii ku riday dawladii?
Intaa meesha ka qaylinaysaa waa Alshabaab oo shaati kale xidhatay.
Somaliya waa ameel ay ku noolyihiin dad Tuugo iyo Cawaan isku duuban.
Waa runtaa haddii inta meesha ka muuqata kulli mid ka bixin oo la wada xiro in qarax dambe maqasheen Xamar.
They are all bloody terrorists.
Eeesh qiyaasak.Ninka ku nool Muqdisho ee qaraxyada arkaya ee ka aamusan,misana u banaan baxaya wiil si qaldan ugu dhintay hawlgal uu waday Policeku?
1000 qof oo hal qarax ku dhintay ayuu u soo joogay lol
2 week oo wada qarax ah ayuu u soo joogay lol
Bal aqliga wiil yar shaqo qaran ku dhintay ayaa laga dhigayaa mushkilad oo soo korodhay
Magaalo Mooryaaneed ayay noqotay Muqdisho.
Dhashii Mooryaanta oo Bajaajka qaraxyada ku walwaala.
Qolyaheenna NAF & NOLOL, waxaan madax u dooranay Mr BaHaL. Ikastoon yarnahay HADDANA mitid fara yar mirihii bata kama macaashaan. Waxaan ka xumahay in kooxda Garqaad oo Qaran diidka ah ay naga hoggaansadeen LOP. Guusha annagaa leh. WBT
Adeer Mr bahal waa hogaamiyaha annagoo dhan. Kala aragti duwanaanshuhu waa helkiisa laakiin Mr bahal waxa kahadashinaayo maaha qabiil neceyb iyo qabiil jeceel toona sida adiga iyo qaar kaloo badan.
Waxaan u qaatay In aad mr bahal dadka nacsiineysid. Alla maxaan ku fahan sanahay.
Waxaad tiri tigree ayaan la midoobeynaa. Dee orda la midoobe tigreega bara sida haweenka loo xoogo kadibna loo dilo.
WAR TAASI DAWLAD MAAHEE WAA PROJECT=MASHRUUC.INTIRE POLICY.
WAA WAX DAWLAD MAGACA UGA EG LKN AAN AHAYN. DAWLAD.
WAANA TUUL LA SAMAYSTEY KII SAMAYSTEY BAANA $ MLYNS KU BIXIYA SI DANIHIISA UU UGA FUSHADO.
Axmed Somali waa nin wadanka u soo shaqeeyay.Biloowgii dawladnimada Somaliya iyo dhamaadkiiba wuu u soo joogay.
Xaq badan ayuu wadanka ku leeyahay oo lacagtisii Halgabka ayaa cidlo ka joogaa.
Waar Oaday u dejiya oo bal arinka dhulka dhiga.
Waan ogahay inaad tahay wadani Somaliyeed,bal laakiin Axmed Somali xaq gaara ayuu wadanka ku leeyahy.
Axmed waa nin u baahan in Bilado loogu tolo oo uu meelahaa ku raaxaysto.
Ma naga hubtaa sxb
Axmed somali adeer ku daayay. Balse aragtideyda cidna ugama hibeysan doono.
Adeer waan kuu istaagay.